"Neymar Wuxuu Gaadhsiisan Yahay Heerka Messi, Waxaanu Ku Dul Socon Lahaa Koox Kasta Oo Premier League Ah" - Gool24.Net
“Neymar Wuxuu Gaadhsiisan Yahay Heerka Messi, Waxaanu Ku Dul Socon Lahaa Koox Kasta Oo Premier League Ah”
Neymar Jr waxa uu PSG ka caawiyey inay u gudubto wareegga semi-finalka tartanka Champions League iyagoo 2-1 ugu guuleystay ciyaar daqiiqaddii ugu dambaysay ay neeftu kusoo noqotay oo ay goolka barbarraha heleen, ka hor intii aanay goolka guusha helin daqiiqaddii saddexaad ee waqtigii dheeraadka ahaa.
Halyeygii khadka dhexe ee kooxaha Tottenham iyo Wolves ee Jamie O’Hara ayaa rumaysan in Neymar Jr uu gaadhsiisan yahay heerka ciyaareed ee xiddiga Barcelona ee Lionel Messi, laakiin waxa uu u sheegay kooxda reer England ee Premier League in uu dushooda ku socon lahaa haddii uu tegi lahaa.
Inkasta oo isbeddelka ugu badan ciyaarta ay ku keeneen Kylian Mbappe iyo Eric-Maxim Choupo-Moting oo beddel kusoo galay, haddana waxa uu xiddiga reer Brazil ahaa khatarta ugu weyn ee ay Atalanta waajahaysay iyadoo uu dhawr kubbadood la hor tegay goolka oo uu khasaariyey, difaaca iyo khadka dhexena uu laf dhuun-gashay ku ahaa.
“Neymar wuxuu kusoo bilaaban lahaa ciyaar kasta oo horyaalka Premier League ah. Waxaanu xataa ka wanaagsan yahay Sadio Mane, Roberto Firmino iyo Mohamed Salah. Waa ciyaartoy go’aamiya guusha, waana taas waxa uu qabtaa. Hibadiisa ciyaareed iyada ayaa iskeeda u hadlaysa, waxaanu qabanayaa wax aanay cid kale samayn karayn.” Ayuu yidhi Jamie O’Hara oo la hadlayay talkSPORT.
Laacibkan hore waxa uu ku dheeraaday amaanta Neymar isaga oo yidhi: “Wuxuu gaadhsiisan yahay heerka Lionel Messi marka laga eego dhinaca awooddiisa. Wuxuu ciyaarta ugu guuleysan karaa kalidii. Wuxuu ku dul socon lahaa koox kasta oo Premier League, wuxuuna ku soconayaa koox kasta oo dunida guudkeeda ka dhisan.”